Ahoana ny fizarana ny kitendry iPad | Vaovao IPhone
Ny iray amin'ireo toetra atolotry ny iPad antsika, dia ny afaka manao antontan-taratasy saika misy, tsotra izay raha misy fetrany omen'ny fitaovana antsika, miaraka amin'ny iPad na aiza na aiza misy antsika. Fitaovana misy efijery 9,7-inch tena tsy mahazo aina izy ireo manandrana manoratra lahatsoratra mitazona azy amin'ny tanana roa. Miezaka manamboatra an'io olana, Apple dia manolotra antsika ny fahafahana mizara roa ny kitendry amin'ny roa, mba hahafahantsika miditra amin'ny kitendry amin'ny ankihiben-tsika hidikaantsika amin'ny alàlan'ny ankihiben-tsika hanoratantsika ny fitendrena.
Dingana tokony harahina hanasaratsarahana ny kitendry iPad
Miakatra aloha isika Fikirana.
Ao anatin'ny toe-javatra dia mankany amin'ilay faritra izahay General ary tsindrio Ohatra. Ity fizarana ity dia mampiseho ny safidin'ny fanaingoana fitendry izay ananantsika miaraka amin'ny iOS 8, ao anatin'izany ny safidy hanampy karazana klavier vaovao.
Ao amin'ny sakana fahatelo amin'ny safidy, miakatra hatrany isika Kitendry misaraka, vakizoro izay ahafahantsika mamela azy ireo hankafy ny kitendry fisarahana.
Ankehitriny rehefa avelantsika ny safidy hankafizantsika ny kitendry fisarahana dia tsy maintsy tsindrio ary tazomy ny bokotra havanana ambany, izay mampiseho kitendry, ary hisintona ny rantsan-tànanao mankany amin'ny safidy Split. Raha te hiverina amin'ny klavier mahazatra isika dia tsy maintsy manao ny dingana mitovy indray isika, mitazona ny bokotra aseho amin'ny klavier ary manindry Merge.
Safidy fisarahana sy fisarahana tsy misy afa-tsy amin'ny maodely iPad 9,7-inch, izay ny fitazonana ilay fitaovana amin'ny tanana roa, ny fifehezana azy dia mora kokoa noho ny amin'ny tanana iray. Ao amin'ny iPad Mini, na dia misy ao anaty menus aza io safidy io, rehefa azonao atao, dia tsy misaraka ny klavier ary mbola ao anaty singa iray ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fizarana ny kitendry iPad
Tsy dia mitaky be loatra izany, amin'ny iPad (na mini na mahazatra) dia saraho roa ny rantsan-tànana mankamin'ny zorony ary zarainao ny klavier, raha ataonao amin'ny fomba hafa manodidina azy dia hiverina miaraka izy, izany dia atao amin'ny alàlan'ny default, tsy misy mila manamboatra na inona na inona. Miarahaba.
Ny iPhone 7 Air dia mety ho toy ity prototype ity
8 Incredible Rare Limited Edition vokatra tianao ho fanananao